Novair dia nahazo A321neo voalohany
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Novair dia nahazo A321neo voalohany
Jona 30, 2017
Seranam-piaramanidina Soeda Novair, nandray ny A321neo voalohany tamin'ny onitra avy amin'ny Air Lease Corporation (ALC). Ny A321neo dia hanatevin-daharana ny fiaramanidina Airbus misy an'i Novair misy fiaramanidina A320 Family roa.
Ny fiaramanidina dia manana seza 18 santimetatra milamina amin'ny endriny mpandeha iray kilasy 221. Powered by CFM LEAP-1A maotera, ny A321neo dia hiorina ao Stockholm ary hiasa sidina charter avy any Suède, Danemarka ary Norvezy mankany amin'ireo toeran-tany atsimon'i Eropa sy Egypt.
Ny A320neo Family dia mampiditra ireo haitao farany indrindra ao anatin'izany ny motera vaovao sy ny Sharklets, izay miaraka manangona tahiry solika 15 isan-jato farafaharatsiny ary 20 isan-jato amin'ny taona 2020 ary koa fihenan'ny tabataba 50 isan-jato. Miaraka amin'ny kaomandy 5,000 mahery voaray avy amin'ny mpanjifa 92 hatramin'ny nanombohany tamin'ny 2010, ny fianakaviana A320neo dia nahazo ampahany 60 isan-jato amin'ny tsena.
Ny seranam-piaramanidina Budapest dia mifandray tsara amin'i Aeroflot
Halatra firenena: Fitsaboana iray ihany koa ho an'ireo mpizahatany mitsidika an'i Hawaii amin'ny 4 Jolay
Countdown hanokatra an'i Saudi Arabia ho an'ny fizahan-tany miaraka amin'ny fepetra
Hijanona ao anatin'ny fe-potoana i Jamaika